Firenena tsy misy Visa ho an'ny pasipaoro espaniola - ALinks
Ireo manana pasipaoro espaniola dia manana fitsangatsanganana tsy misy visa any amin'ny firenena 188, ary mahatonga azy io ho iray amin'ireo pasipaoro dimy voalohany manerantany.
Fitsangatsanganana tsy misy visa ho an'ny olom-pirenen'i Espana
Raha manana pasipaoro espaniola ianao dia afaka mitsidika ireo firenena ireo nefa tsy mahazo visa aloha:
Fifanarahana Eoropeana ahafahanao miditra tsy mila visa
Fidirana tsy misy Visa (na visa-tonga-tonga)
Aza adino fa manan-kery ny visa rehefa tonga 6 volana.
Fidirana tsy misy Visa (na visa-tonga-tonga) manan-kery ho an'ny 183 andro
Azafady, mariho fa ny visa rehefa tonga dia manan-kery mandritra ny 183 andro.
Fidirana tsy misy Visa na visa-tonga-tonga
Mariho fa ny visa rehefa tonga dia manan-kery mandritra ny 180 andro.
Mariho fa manan-kery mandritra ny 4 volana ny visa rehefa tonga.
Mariho fa manan-kery mandritra ny 3 volana ny visa rehefa tonga.
Fanondroana pasipaoro ho an'i Espana
Alohan'ny handehanantsika amin'ny fialan-tsasatra ataontsika, dia matetika isika no manontany ny amin'izay mety alehantsika amin'ny pasipaoro, izay tokony hangatahana visa, inona ireo antontan-taratasy ilaintsika handeha ara-dalàna amin'ny firenena vahiny, sy lohahevitra hafa mifandraika amin'ny dia.
Misy tranokala sasany ahafahanao mampitaha ny laharan'ny pasipaoro isan-karazany. Ny laharan'ny pasipaoron'ny firenena amin'ny sehatra manerantany. Ireo tarehimarika ireo dia mifototra amin'ny firenena firy azontsika tsidihina nefa tsy mila mangataka visa na miatrika logistik sarotra. Azonao atao ny mahita ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny pasipaoro Espaniola eto.
Ny Henley Passport Index dia fanombanana manerantany ireo firenena mifototra amin'ny fahalalahan'ny mponina mba handeha. Izy io dia manondro hoe firenena firy no azon'ny tompona pasipaoro aleha tsy mahazo visa avy amin'ny firenena iray.
Ity dia laharana tokana mifototra amin'ny angona avy amin'ny International Air Transport Association (IATA). Mitohy ho tahiry fampahalalana momba ny dia lehibe indrindra sy marina indrindra manerantany.
Raha ny Henley Passport Index dia eo amin'ny toerana fahefatra i Espana, toerana 188 tsy misy visa.
firenena afaka visa ho an'ny pasipaoro espaniola
Ahoana ny fomba hahazoana asa any Kolombia?
Ahoana no ahazoana asa any Espaina? Fantaro eto !!
Toerana hialana any Kolombia.
Karazana visa sy fepetra takiana ao Arzantina
Tarika mahay indrindra latsaky ny 2500
Ahoana ny fomba hifindra any Canada any India? - Mifindra monina any Canada